Cawimaad mise Curyaamin: Maxay tahay sababta Maraykanku Raashinka u siiyo Afrika
By ibrahim Aden shire November 16, 2017
Waxaa indhaeenna ku badan kiintaallada haruurku ka buuxo, tanagyada saliidda lagu cabbeeyay, kiishashka lagu ningaxay boorashka macaan ee nafaqadiisu waqti yar haweenka iyo caruurta macaluushu hayso ku cayiliyo. Dhammaan alaabtaan waxaa ku sawiran calanka buluuga iyo casaanka isugu jiro ee lagu xardhay xidigiha ee Maraykanka, hoosna waxaa far waaweyn lagu dhigay “USAid” gargaarka Maraykanka.
Nacfigaan kali kuma nihin ee waxaa sideenna oo kale helo dhammaan walaalaheenna ku nool qaaradda madow. Sanadki hore (2016) wuxuu Maraykanku bixiyay raashin qiimihiisu yahay 2.2 bilyan doolar. 80% raashinkaan waxaa la siiyay Afrika. Hadaba side ku billaabatay raashin bixintaan yaase faaiido ku qabo?
Goormaa la billaabay?
Dagaalki labaad ee adduunku wuxuu dhaawac xooggan gaarsiiyay waddamadii galbeedka Yurub. Gaajo, macaluul iyo maal la’aan ayaa ku dhacday. Maraykaynku oo ay xulufo ahaayeen kana tun waynaa ayay u muuqatay inuu gargaar u fidiyo saaxiibadii inta ay soo kabanayaan. Gargaarku uu Maraykanku siinayay Yurub wuu noocyo badnaa cunnaduna qayb ayay ka noqotay.
Waxay dowladdi Maraykanka ee waqtigaas ogaysiisay beeralaydooda inay soo saaraan raashin aad u tiro badan. Soo saaridda raashinkaan lacag xooggan ayuu maraykanku ku bixiyay. Wixii kasoo haro intuu dalku u baahanyahayna waxaa uu u dhoofiyay Yurub oo naftu haysay. Fakerki si qurux badan ayuu u shaqeeyay. Reer Yurub waa noolaadeen oo raashin caloosha u buuxiyo ayay heleen. Maraykanku sharaf iyo karaamo ayuu ku helay caawinta saaxiibadii. Beeralaydi waa taajireen oo lacag dowalad bixinayso oo aan xisaab lahayn ayaa usoo xarootay, maal galin iyo isbaalarin ayayna u dhaqaaqeen.
Marki ay Yurub cagaheeda ku istaagtay, waxay iska joojisay kaalmadi ay heli jirtay waxay u sheegtay waddamadii wax siin jiray inay waxooda haystaan. Waa ayaa ku baryay beeralaydi Maraykanka ee baqaaradu u buuxeen, qorshayn tobannaan sano ah oo ay raashin ku dhoofiyaanna dajistay. Waxay billaabeen inay dowladda cadaadis ku saaraan inaysan joojin lacagti ay siin jirtay raashinkaanna meel u raadiso. Waxay shirkadaha ka ganacsado raashinka uu Maraykanku soo saaro ku yeesheen dad matalo labada aqal ee dalka. Waxay maal galiyeen looyaro iyo ururo u doodo. Ishi muuqatay ayaa noqotay Afrika oo macaluul la tiicaysay. Sidaas ayaa raashinki Yurub loo rari jiray loogu weeciyay qaaradda madow.
Laakiin markaan cashar fiican ayaa laga bartay caawinti Yurub. Waxaa soo baxday haddii loo hagar baxo cidda la kaalmaynayo inay dagdag isugu filnaan sidaasna gacantaada ooga bixi. Sidaa darteed waa in wax loo bixiyaa si ay gacanta ugu jiraan raashinkana loogu qubo. Tallaabo walba oo ka maaransiin kartana waa in lasoo xiraa. Ma jiro sharci sidaan u qoran laakiin qaabka wax u dhacaan ayaa tusayo.
Yaa faaiido ku qabo?
Shaki kuma jiro in dad badan oo Afrikaan ah innaguna aan ku jirno nacfigu wax naga soo gaaro. Maalin gaajo kaa bi’iyaa ama islaan kuu umushay siisataaba kiish boorash ah oo aad bilaash ku heshay cidina ma diiddo. Laakiin faaiidada ugu badan ee raashinka waxaa helo dadka Maraykanka oo isagu jiro noocyo badan.
Dhammaan raashinka uu bixiyo Maraykanku waxaa uu ka baxaaa dalkiisa isaga ayaana laga soo raraa. Sanad walba dowladdu waxay siisaa beeralayda lacag kaalmo ah si ay u soo saaraan raashin xad dhaaf ah. 11% in ka badan qiimaha caadiga ee raashinku suuqa ka joogo ayaa lagu siiyaa shirkado gaar ah inay kordhiyaan raashinka ay soo saaraan. Lacagtaan tartan ayaa loo galaa ciddii ku guulaysato ayaa mashruuca la siiyaa. Sanadki 2012ki labo sadexdaad (1.2 milyan oo tan) raashinki cawimaadda u bixiyay maraykanku waxaa laga gaday sadex shirkadood oo kaliya (ADM, Cargill iyo Bunge).
Sidoo kale waxaa faaiido xoog badan ku qabo raashinka qaaradda madow lagu qubo, shirkadaha gaadiidka leh sida kuwa baabuurta xamuulka ah iyo maraakiibta. Nus ka mid ah lacagti raashinka lagu bixiyay sanadki hore ee aan kor ku soo sheegnay waxaa qaatay maraakiib iyo baqaaro. Taasi waxay ka dhigantahay in , inkastoo 2.8 bilyan doolar raashin lagu magacaabay 1.4 bilyan tirisboot ayaa loo qaatay, haddana xisaabta nagu qoran waa ku jirtaa. 1.4taan nama soo wada gaarto. Hayadaha maraynaka ee raashin qaybinta u xilsaaran waxay rukhso u haystaan inay qaar iibiyaan oo qarashka ay ka helaan isticmaalaan. Sanadki 2001-di dakhligi soo galay 7 hayadood oo maraykanka ugu waaweyn sida CARE, 25% wuxuu ka yimid raashin ay caddaysteen.
Marki caqliga lagu eego, sida uu Maraykan wax u wado yaab ayay leedahay. Qiimaha uu maraakiibta ku bixiyo waxay kuwa caadiga ka qaalisan tahay 46%, waqtiga raashinka ku geeyaanna waxay kuwa dalalka kale dheer yihiin 14 asbuuc. Taasi waxay ka dhigan tahay in khasaare lacageed ugu jiro dowladda maraykanka, sidoo kalana dadka baahan aysan cunnadoodi waqtigi loo baahnaa ku helayn.
Arrintaan waxaa hagayo sharci la qoray 1950-ki oo oranayo “raashinka deeq ahaanta loo siiyo dalalka shisheeye waa in laga iibiyaa beeralayda maraykanka, gudihiisa lagu diyaariyaa, marakiibtiisana lagu qaadaa xitaa haddii ay suura gal tahay in la helo meelo ka raqiisan”. Sharcigaan waxaa u dalbanayay 50% kaliya laakiin dowladda Taraam ee hadda soo gashay waxay rabtaa inay ka dhigto 100%. Waa markaan marka aad fahmayso waxay soomaaliddu kaga jeeddo “caqli gaalo iyo indho quraanjo midna lama arko”.
Laakiin haddii aad toosh iftiin badan isticmaasho way kuu muuqan ujeedka dowladdu khasaaraha badan u galayso iyadoo qiimo ka jaban heli karto. Raashinkaan waxaa uu keenaa faaiidooyin fara badan. Waxaa ku nool malaayiin qof oo maraykan ah. Kuwa leh beeraha iyo kuwa ka shaqeeyo, kuwa leh maraakiibta iyo kuwa ka shaqeeyo, baqaarada lagu kaydiyo, kuwa ka shaqeeyo diyaarinta iyo jawaan galinta, kuwa leh shirakadaha sameeyo suntan cayayaanka ka ilaaliso iyo inta ka shaqayso, gawaarida waaweyn ee lagu daad gureeyo liisku waa buug muggiis.
Intaas waxaa dheer, in shirakada ka ganasado arrintaan ay awood ku yeesheen baarlamaanka dalka sidaas darteed aan la jiiri karin rabitaankooda. Sanadki 2005ti Buush dowladdiisi ayaa soo jeedisay in rubuc ka mid ah (1.2 bilyan doolar) miisaaniyadda lagu gadayo raashinka deeqda ah loo qorsheeyo in lagaga iibiyo waddamada loo wado. Arrintaas waxaa is hortaagay golaha baarlamaanka waana la marin waayay. Difaacaas bilaash kuma imaan. Beeralaydu waxay 15 milyan oo doolar ku bixiyeen kaambaynki doorashadi 2004ti, doorasho walbana waa sidaas. Intaas oo kaliya maahan. cunnada waa tan lagugu xukumo laguugna manno sheegto. Waa midda dowlado badan oo afrikaan ah ugu hoggaansamaan amarada Maraykanka. Waa mida lagu faafiyo dhaqanka Maraykanka iyo afkaartiisa.
Dadku ma wada moogo khiyaadana meesha ku jirto, qaar badanna iyagoo og ayay ka indho qarsadaan duruufo jiro iyo dano gaar ah dartood. Tusaale, madaxweynaha Yugaandha mudane Msafeeni ayaa laga hayaa “Yugaandha ayaa deeq siiso wadamo kale. Waxaa naga lumo malaayiin lacag ah oo aan heli lahayn sanad walba. Dhab ahaanti dadka reer Yugaandha ayaa ka qayb ka ah shaqo abuurka iyo kobaca dhaqaale ee waddamo badan. Waxaan nahay deeq bixiyaal aan loo ogayn”. Wuxuu kaga jeeday in haddii aysan Yugaandha qaadan raashin, dad badan oo Maraykan ah camal la’aan ku dhici lahayd.
Muran kuma jiro in raashinkaan dhib weyn ku yahay horumka beeraheenna. Waxaan wada ognahay waqtiyada lagu soo beego bixinta raashinka noocaan ah. Waxaan ognahay qiimo jabinta uu ku sameeyo midka innaga noo baxo. Waxaan ognahay in qaar badan oo ka mid ah uu baqaarada uu ku dhaco dadka oo gaajo la tabaalaysan. Hadana saas oo ay tahay masoo jeedinayo in la yiraahdo ha mamnuuco waqtigaan.
Marka koowaad ma lihin dowlad awood u leh fulinta amar mamnuucid. Labo, wali waxaa jiro dad badan oo faaiido ka helo kuna nool xoogaaga la qaybiyo. Tan ugu muhiimsan ayaa ah in hadda aynu u diyaarsanayn in beeralaydeennu booska buuxiso. Go’aannada lab lakaca ah waa kuwi Zimbabwe ka waday waddan raashin dhoofiyo una waday mid raashin deeq ah ku nool. Inta aannan joojin raashin dad kale na siiyaan waa in aan baranaa sida wax loo beerto. Maanta dhiba ugu badan ee haysto beeralaydeennu waa aqoon la’aan horseeday wax soo saar aad u yar. Sidoo kale waxaan jirin qalab fududeeyo kordhinta wax soo saarka. Aan ku mashquulno diyaarinta dad soo saari karo raashin ku filan dadkeenna ka hor inta aanan ku yaacin mid dadkiisa u danaynayo innagana wax naga siiyay ujeeddo gurracanba ha ka danbaysee.
Kala soco: https://ibrahim-shire.blogspoat.co.uk